Cardi B ကို အသည်းအသန် တောင်းပန်နေတဲ့ Offset
On December 18, 2018 December 18, 2018 By Aminnyar
အမှားအယွင်းတွေကို ကျူးလွန်မိခဲ့ပေမယ့် ကျူးလွန်မိခဲ့တဲ့ အမှားတွေကို သေချာသိသွားသူ တစ်ယောက်အတွက် ပြင်ဆင်ခွင့်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူးလား။ အမှန်ဘက်ကိုရောက်အောင် မသွားနိုင်တော့ဘူးလား။ သွားခွင့်တွေရော မရှိနိုင်တော့ဘူးလား။ အခုရက်ပိုင်းအတောအတွင်း နာမည်ကျော် Rapper တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Offset ဟာ အဲဒီသဘောတရားတွေရဲ့ ကြားထဲမှာ ပိတ်မိနေခဲ့တယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သူ့ရဲ့ အိမ်သူသက်ထား ဇနီးမယားဖြစ်တဲ့ Cardi B က အိမ်ထောင်သက် တစ်နှစ်ကျော်ကျော်လေးမှာ သူနဲ့ ကွာရှင်းဖို့အတွက် ဒီဇင်ဘာလ ၄ […]
Featurescardi bCelebrityDating NewsHip-Hop / RapPeopleVarietyLeaveacomment
တစ်နှစ်သာ ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ Cardi B နဲ့ Offset တို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး
On December 6, 2018 By Aminnyar
၂၀၁၇ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကနေစပြီး ဒီနှစ်ထဲမှာလည်း အရမ်းတွေနာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး Rapper တစ်ယောက်ဖြစ်သူ Cardi B ဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တုန်းက သူမရဲ့ တရားဝင် Instagram စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ဖိုင် တင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီ ဗီဒီယိုလေးကနေတစ်ဆင့် သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေကို စကားတချို့ ပြောခဲ့တာကို မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ “ကဲ… ရှင်တို့ဟာ ကျွန်မကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်နေရတယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ။ ရှင်တို့အားလုံးလည်း သိသင့်ပါတယ်။ ကျွန်မလည်း […]
Music Newscardi bCelebrityHip-Hop / RapVarietyLeaveacomment
Cardi B ရဲ့ ယောကျာ်းဖြစ်သူ Offest အဖမ်းခံရပြန်ပြီ…
ဒီနှစ်ထဲမှာ အမျိုးသမီး Rapper တစ်ယောက်အဖြစ် အရမ်းအောင်မြင်နေတဲ့ Cardi B ရဲ့ ယောကျာ်းဖြစ်သူ Offest ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့တုန်းက Georgia မှာရှိတဲ့ Atlanta မြို့မှာ အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်လို့ TMZ မီဒီယာရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ သိရပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ Georgia မှာရှိတဲ့ ရဲစခန်းက အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Offest ကို သူ့ကားထဲမှာ ဆေးခြောက်တချို့နဲ့အတူ ခြောက်လုံးပြူး သေနတ်ကိုပါ […]
Music Newscardi bHip-Hop / RapLeaveacomment
သမီးလေးမွေးဖွားတာကို ကြေငြာလိုက်တဲ့ Cardi B နဲ့ Offset
On July 12, 2018 July 12, 2018 By Angel
Rapper အဆိုတော်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Cardi B နဲ့ Offset တို့ကတော့ သမီးလေးမွေးဖွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကို သူတို့ရဲ့ social media တွေကနေ ပရိသတ်ကို ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ချစ်သူရည်းစားတွေလိုဘဲ နေထိုင်လာပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကိုတော့ ရုတ်တရက်ကြေငြာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သမီးလေးမွေးဖွားဖို့ သိပ်မလိုတော့တဲ့ အချိန်မှာတော့ Offset နဲ့ မစေ့စပ်ခင်ကတည်းက လက်ထပ်ထားခဲ့တာပါဆိုတဲ့ အကြောင်းကို သူမရဲ့ Twitter ပေါ်ကနေ ဖွင့်ဟဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ This why […]
Billboard No.1 ရလို့ ပျော်နေတဲ့ Cardi B
On July 3, 2018 By Angel
Cardi B တစ်ယောက်ကတော့ အခုရက်ပိုင်းတော်တော်လေး ပျော်နေပုံရပါတယ်။ အသက် ၂၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သူမကတော့ အခုနောက်ပိုင်း သမီးလေးတစ်ယောက်ကို ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရပြီး ယောကျော်းဖြစ်သူရဲ့ ဂရုစိုက်မှုကိုလည်း ရရှိနေလို့ ပျော်လို့တောင်မဆုံးနိုင်သေးတဲ့ အချိန်မှာဘဲ ဒီနေ့မှာတော့ Billboard Top 100 မှာ နံပါတ် ၁ နေရာကို ရရှိခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ Cardi B ဟာ Rapper အမျိုးသမီးအဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး I like It […]
Music NewsBillboard Musiccardi bLeaveacomment
Billboard Hot 100 မှာ နံပါတ် ၇ နေရာရောက်ရှိနေတဲ့ Cardi B ‘I LIKE IT’
On June 6, 2018 By Angel
အခုတလော Cardi B တစ်ယောက် လူငယ်တွေကြားမှာ တော်တော်လေး hot ဖြစ်နေပါတယ်။ လူမဲအမျိုးသမီးတွေထဲက အောင်မြင်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပေမယ့်လည်း သူမရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာ တာဝန်ကျေလွန်းပြီး ဂရုတစိုက်ကြိုးစားအားထုတ်နေသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးအဆိုတော်တစ်ယောက်ဆိုပေမယ့် ရှားပါးလွန်းတဲ့ အမျိုးသမီး Rap အဆိုတော်တွေကြားမှာ အကြမ်းစား အလန်းစား Rap စာသားတွေကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆိုနိုင်တဲ့ နေရာမှာလည်း နှစ်ယောက်မရှိပါဘူး။ ဒီလိုကြိုးစားမှုတွေကြောင့် ပြန်ရခဲ့တဲ့ ရလဒ်တွေကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူရလောက်တဲ့ထိ ရလဒ်ကောင်းတွေ […]
Music NewsBillboard Musiccardi bCelebrityHip-Hop / RapVideoLeaveacomment
လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ Maroon5ရယ် (ကုန်ပြီလား!)
On June 1, 2018 July 12, 2018 By Angel
ဒီကနေ့ရဲ့ အင်တာနက် အသုံးပြုသူအားလုံး တနေရာတည်း ရောက်ရှိနေတဲ့ နေရာကို ပြပါဆိုရင်တော့ Maroon5ရဲ့ music video အသစ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ မြေကြီးလက်ခက်မလွဲပါ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင်တော့ Maroon5ရဲ့ ”Girls Like You” ဆိုတဲ့ MTV ကို မေလ ၃၁ ရက်နေ့မှာ လွှင့်တင်ခဲ့တဲ့တာဖြစ်ပြီး Featuring အနေနဲ့ Cardi B က ပါဝင်သီဆိုထားပါတယ်။ […]
Music Newscardi bCelebrityLeaveacomment
Bruno Mars ရဲ့ 24K Magic World Tour မှာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေမယ့် Cardi B !!
On February 5, 2018 By fairy
ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ Grammy များဆုပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Bruno Mars ရဲ့ လက်ရှိလုပ်နေဆဲဖြစ်တဲ့ 24K Magic World Tour အကြောင်းလေးပြောကြည့်ရအောင်လား… ခေတ်သစ်မိုက်ကယ်လ်ဂျက်ဆင်လို့တောင်အခေါ်ခံနေရတဲ့ Bruno ဟာ အဆိုအတီးသာပိုင်နိုင်ရုံမက အကမှာလဲ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ မှာထုတ်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ 24K Magic Album အတွက် ထွက်နေတဲ့ Tour မှာ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းနာမည်ကြီးလာတဲ့ Cardi B နဲ့ သူ့ရဲ့ World […]
Music Newsbruno marscardi bLeaveacomment